June 7, 2021 2042
आफ्नै ससुराले बुहारी को गो प्य अ ङ्ग मा छु ने जस्ता नराम्रा हर्कत गरेका भिडियो भन्दै यति बेला सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन् । परिवारभित्रै असुरक्षित बनेका छन् नेपालमा महिलाहरु भन्दै धेरैले यस घट`नाको वि रोध ग रेका छन् ।
आफ्नै बुहारी`माथि कु दृष्टि ल गाउने ससुरा`लाई देशव्यापी रुपमा क डा का र बा हीको माग भइरहेको छ । यद्यपि घटना निकै रह`स्यमय रहेकाले प्रह`रीले अनु|सन्धान गरिरहेको छ । के हो त वास्तविकता ? त्यो आउन बाँकी नै रहेको छ ।
सबिता भण्डारीको माइती`पक्षले ह त्या नै ग रे को हो भन्दै न्यायको माग गरिरहेका छन् । घट`नाको प्रकृति` हेर्दा आफै गरेको आ` त्म ह त्या होइन भन्दै देश तथा विदेशमा रहेका धेरै नेपाली`हरुले चौतर्फी वि`रोध गर्दै आएका छन् ।
बुहा`रीलाई ससुराले छोरीको रुपमा हेर्नुपर्ने तर आफ्नै छोरी समान बुहारीलाई पटक`पटक दु र्व्य वहार गरेपछि सहन नसकेर यस्तो भएकाे भन्ने अ ड्कल पनि धेरैले गरेका छन । सबैले आफ्नो आफ्नो धारणा राखि`रहेका छन ।
त्यसै क्रममा यति|बेला सबिता भण्डारीका श्रीमान मिडि`यामा आएका छन।घरमै कोठामा मृ त फेला परेकी सविताको ह त्या हो या आ,त्मह,त्या हो भनेर अहिले सामा|जिक संजा`लमा चर्को बहस चलेको छ। उनले यस्तो बताएका छन् ।
Prevफेरी अस्ताए अर्का वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर , नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो क्ष`ति
Nextघट्यो सुनको मूल्य, सुनको भाउ तोलाको कति पुग्यो ? हेर्नु`होस्
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (134587)